fanontaniana Carriers ILS
4 volana 3 herinandro lasa izay #1385 by lucwou
Ny entana mitondra ny Rikoo AI napetraka sy napetraka ao P3Dv4.4
Asa goavana sy fiantraikany lehibe ary sary.
Ny hany olana atrehako: tsy afaka manidina ny fomba fiasa ILS aho noho ny tsy fisian'ny signal.
Aircraft no Aerosoft F14.
Nampiasa hafahafa samihafa aho tany Tacan sy Nav1, saingy tsy nisy vokany.
Tacan sy ILS signals dia miasa tanteraka any amin'ny seranam-piaramanidina eny amoron-dranomasina.
Mety tsy manana ILS freq ve ireo mpitatitra ireo?
Mba toroy hevitra.
Fotoana mamorona pejy: 0.153 segondra